Hery Manantenasoa Micheline : “Nampiditra hetra 1.300 miliara Ar ny faritra Analamanga ny taona 2015” | NewsMada
Hery Manantenasoa Micheline : “Nampiditra hetra 1.300 miliara Ar ny faritra Analamanga ny taona 2015”
Par Taratra sur 05/04/2016
Recette générale d’Antananarivo na RGA. Sampan’asa iray lehibe ao amin’ny Tahirimbolam-panjakana, misahana ny vola miditra. Nitondra fanazavana momba izany ny tompon’andraikitra voalohany ao aminy, ny receveur général, Hery Manantenasoa Micheline. Fanadihadiana niarahana tamin’ny gazety Taratra.
– Gazety Taratra : Ny hoe RGA, ny famaritana ny asan’io sampandraharaha iray io ato amin’ny Tahirimbolam-panjakana ?
* Receveur Hery Manantenasoa Micheline : RGA, sampandraharaha iray ato amin’ny Tahirimbolam-panjakana, misahana manokana momba ny vola miditra, araka izany anarany izany. Nitambatra teto Antananarivo tao amin’ny Trésorerie principale d’Antananarivo tany aloha ny asa rehetra. Noho ny fahamaroan’ny asa nanomboka ny taona 1983, nozaraina roa izany, nasiana ny Paierie générale d’Antananarivo sy ny Recette générale d’Antananarivo. Ny PGA, misahana ny famoaham-bola ary ny RGA, miandraikitra ny vola miditra.
Misy vola miditra izany ato ary avy aiza ireo vola ireo ?
* Misy vola miditra tokoa ato, araka izany anarany izany, misy ny avy amin’ny hetra mivantana ary misy tsy avy amin’ny hetra na hoe ivelan’ny hetra. Mahakasika ny hetra mivantana izany, ny ato amin’ny RGA no manangona ny hetra rehetra eto amin’ny faritra Analamanga. Izany hoe, tsy mpitaky hetra akory ny RGA fa anjaran’ny sampandraharahan’ny hetra na ny DGI izany ary izay vola voaangona avy any, arotsaka avy hatrany ato amin’ny RGA. Miditra ato amin’ny RGA avokoa ny vola voaangon’ireo sampandraharahan’ny ladoany miasa eto faritra Analamanga, toy ny ao Antanimena, Ivato Aéroport ary Ivato Mamory.
– Ahoana izany fifandraisana eo amin’ny asan’ny RGA sy ny sampandraharahan’ny hetra na ny DGI (Direction générale des impôts)?
* Miandraikitra ireo ivon-ketra rehetra, fanangonan-ketra avy amin’ireo orinasa vaventy, hetra avy any amin’ny faritra ny DGI. Marihiko fa ny RGA, miasa ato amin’ny faritra Analamanga. Ka izay hetra miditra any amin’ireo ivon-ketra rehetra ireo ato amin’ny faritra Analamanga, tsy maintsy arotsaka ato amin’ny RGA, mba ho ao anaty kitapom-bolam-panjakana iray.
– Azo fantarina ary ve izany ny ampahan-ketra miditra ato amin’ny RGA, faritra Analamanga ?
* Raha mahakasika ny hetra manokana, tsara ho fantatra fa ato amin’ny RGA ny 85 % amin’ny hetra rehetra miditra eto amin’ny firenena manontolo. Ny antony, misy ny sampandraharaha misahana ireo orinasa vaventy manerana ny Nosy na ny Direction des grandes entreprises (DGE) eto Antananarivo.
Mitombo ny vola miditra
– Mitombo ve izany ny vola miditra sa mihena, araka ny fahitanao azy ? Mandoa vola ara-dalàna ve ireo orinasa vaventy ireo sa mangataka andro sa misy trosam-panjakana tsy voaloa any ?
* Hamafisiko ihany fa ny fitakiana hetra no asan’ny DGI. Mitombo kosa ny vola miditra : 2014, nampiditra hetra 1.250 miliara Ar ato amin’ny faritra Analamanga ihany ; 2015, tafakatra 1.300 miliara Ar.
– Any amin’ny faritra ve izany misy sampandraharaha toy ny RGA ?
* Any amin’ny faritra, ny Trésorerie génerale ihany sady misahana ny famoaham-bola no manangona ny vola miditra.
– Eto Antananarivo izany, misy ny PGA sy ny RGA, mifampiankina ve izany ny asa sa samy mahaleo tena sa mifameno ?
* Tsy mifampiankina, samy mahaleo tena nefa azo lazaina fa mifameno ihany. Asa samy manana ny azy. Famoaham-bola ny PGA fa ny ato indray, momba ny vola miditra. Mifameno ihany koa anefa, satria mifandray ny asa. Tanjona ato amin’ny Tahirimbolam-panjakana ny manome fahafaham-po ny mpanjifa, noho izany, ampiana ny PGA amin’ny fandoavana fisotroan-dronono, karama sy izay famoaham-bola hafa azonay atao.
– Ahoana ny fanatanterahana izany eo amin’ny lafiny teknika, tsy ahitana olana ve ?
* Efa miditra tsikelikely amin’ny dématérialisation izao ny Tahirimbolam-panjakana amin’ny fampiasana logiciel mifanaraka amin’izany. Fanamby lehibe io dématérialisation io. Mety ny fandaminana. Na eo aza ny andraikitray manokana, efa mandray anjara amin’ny fandoavana ny fisotroan-dronono izahay hatramin’izay ary amin’izao, miezaka manatsara izany any amin’ireo Perceptions principales sivy eto an-dRenivohitra izay miankina mivantana amin’ny RGA. Manao ezaka izahay amin’ny fanafainganana ny fandoavana ny fisotroan-dronono. Ny ao Ambanidia, ohatra, caisses valo amin’izao fotoana izao raha efatra ny teo aloha. Ny any Isotry, zahana ny ho fanamoràna izany ary raisinay ny fitarainana rehetra any amin’ireo PP sivy ireo.
Tsy apetrapetraka any amin’ny banky intsony …
– Ankoatra ny fisotroan-dronono sy karama, misy famoaham-bola hafa ve ataon’ny RGA ?
* Mandray anjara ihany koa ny RGA amin’ny famoaham-bola ho an’ireo Etablissements publics, ohatra, ny oniversite, Enam, Cnaps, APMF, FDL sns. Mipetraka aty amin’ny Tahirimbolam-panjakana, ato amin’ny RGA, ny volan’ny Etablissements publics rehetra ary tsy apetrapetraka any amin’ny banky intsony. Koa rehefa mila vola ho fampandehanan-draharaha izy ireny, ny RGA no manome vola azy ireo, toy ny karama any aminy sy izay mety hilany vola.
– Nanomboka oviana ary inona ny antony nahatonga ny volan’izy ireo tsy maintsy naverina aty amin’ny Tahirimbolam-panjakana ?
* Nanomboka teo amin’ny 2010, naverina aty amin’ny Tahirimbolam-panjakana, satria volam-panjakana ny volan’izy ireny. Efa hafainganina izao ny famoaham-bola ilain’izy ireny, ohatra, rehefa mila karama tonga aloha, dia maka fotoana mialoha izy ireo mandefa ny antontan-taratasy ho an’izany aty aminay.
IDEES EN GOGUETTE (Alliance92) 2022-01-19 #Audio 19/01/2022
Ora-mikija: maro ny jiro tapaka teto an-dRenivohitra 19/01/2022
(pas de titre) 19/01/2022
Vidim-piainana: tsinjovina ny tantsaha, arovana ny mpanjifa 19/01/2022
Mbola maro ny asa miandry: mila omena aina vao ny teny malagasy 19/01/2022